Mitovy tanteraka amin’ny asan’ireo lehiben’ny Faritra ny asan’ireo governoram-paritra, araka ny andininy faha-51 hatramin’ny faha-60 ao amin’ny lalàna n°2014-020, momba ny fidiram-bolan’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, ny mahakasika ny fifidianana azy ary ny fitsinjaran’asa sy ny fomba fiasa eny anivon’izy ireny. Tsara tsipihina anefa ny tsy fisian’ny voambolana hoe : « governora » ao anatin’ny lalàmpanorenan’ny Repoblika faha-4. Mazava, araka izany, fa sady tsy eken’ny lalàmpanorenana no tsy hita na aiza na aiza any anatin’ny karazan-dalàna misy ny momba ny governora. Raha ny lôjika dia tsy mifanohitra amin’izay mety ho lalàna misy ny fanendrena» an’ireo governora saingy ny andininy faha-154 amin’ny lalàna fototra momba ny Faritra dia milaza fa « ny rafitra tantanan’ny lehiben’ny Faritra, lany tamin’ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara no mitana ny andraikitry ny mpanatanteraka ». Raha adika izany dia tokony hofidiana izy ireo. Olom-baovao ao anatin’ny fitantanana an’i Madagasikara ny governora. Tsy azo odian-tsy hita anefa fa nandritra ny Repoblika fahatelo sy nandritra ny 5 taona voalohan’ny Repoblika faha-4 dia efa notendrena foana ny lehiben’ny Faritra. Raha ny tena marina izany dia manaraka fotsiny ny efa nataon’ny teo aloha ny fitondrana ankehitriny, hoy hatrany fanazavana.